FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA DOXIEPOO SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika Doxiepoo sy sary
Alika mifangaro Dachshund / Poodle mifangaro
Tobie the Doxiepoo amin'ny faha-7 taonany— 'Tobie no kely indrindra amin'ny alika kely ary kely volo. Ny reniny dia palitao malama volontany Dachshund . Ny volony dia nifarana sahabo ho 3 santimetatra ny halavany, saingy notehiriziko hoatran'ny ter Terery izany. Izy dia ara-tsosialy, toy ny ankamaroan'ny alika sy ankizy, fa kosa nody. I Tobie no nanana ny toetra tsara indrindra, ary tena hendry izy. Nanaiky kilasy fankatoavana izy, nahalala teny 50+, ary nanana lakolosim-baravarany. Te hanana azy ny tsirairay. Nanana olana ara-hoditra + sofina tokoa izy ary ratsy ny fony nony farany. Niaina 11 taona izy. '
Ny alika doxiepoo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Dachshund ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
American Canine Hybrid Club = Doodle
Designer Dogs Kennel Club = Doxie Poo
Mpanoratra International Canine Registry®= Doxiepoo (Doodle)
Drafitra mpamorona endrika = Doodle
'Bubba the Doxie Poo amin'ny 6 herinandro - 1/2 teacup Poodle izy ary 1/2 Dachshund lava volo kely.'
Bubba the Doxie Poo puppy amin'ny faha-3 volana
'Bubba eo amin'ny 9 volana eo amin'ity sary ity. Latsaky ny 5 lbs fotsiny izy. Tiany ny milomano, mihady fasika, mandeha an-tongotra , ary alika mamy sy malemy paika tanteraka izy. Mahafinaritra azy ny miaraka amin'ny alika hafa, indrindra ireo lehibe. Ny 'zanak'olo-mpiray tam-po aminy' dia Golden Retrievers ary tiany ho potika izy ireo. Tena malemy paika izy, tsy dia mivily ary tsy misy afa-tsy kely fotsiny! '
Willow the Doxiepoo ho alika olon-dehibe miaraka amin'ny palitao voafintina kely
Willow amin'ny 6 volana eo ho eo— 'Willow dia mifangaro Dachshund lava volo SY Toy Poodle . Alika mahira-tsaina sy mahavariana izy, manan-toetra sy manintona. '
Willow amin'ny 6 volana eo ho eo— 'Izy angamba no alika ara-panatanjahantena sy ara-batana indrindra nananantsika hatramin'izay, ary vao 6 volana monja izy. Toa tsy manam-petra ny heriny izay mahatonga azy ho namana tsara ho an'ilay zanakay vavy adolantsento. Voaporofo fa henjana sy tsy misy dikany izy rehefa milalao any ivelany ary afa-po tanteraka koa ao an-trano. '
Willow amin'ny 6 volana eo ho eo— 'Na dia mahavariana be aza ny poofy, eo ambanin'io palitao io dia vatana kely malemy Dachshund. Izy zara raha mandatsaka ary ny palitaony dia matevina be ary mora mikorapaka. Tsy ho ela isika dia hijery ny fitantanana izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana maivana. '
Willow amin'ny maha alika kely anao— 'Nanana Dachshunds izahay taloha, ary na dia alika mahafinaritra be aza izy ireo dia tsy nanana izany fitadiavana saina sy toetra manokana izay hitanay tao Willow izany.'
'Mihaona amin'ny bera! Ilay Dachshund / kilalao Poodle mahery setra -). Tsy inona izy fa bandy mamy te hampifaly. Tiany ny mikoropaka, nefa koa tia mahaleo tena rehefa any ivelany. Azo antoka fa manana foza ao aminy izy. Ny orony hatrany amin'ny tany. Rehefa mandeha ho an'ny mandeha isan'andro Miaraka aminy aho maka fehy rehefa any an-tanàna izahay, fa ankoatr'izay dia mandeha eo anilako izy na ao anatin'ny radius 10-ft avy amiko. Matory samirery ao amin'ny tranon-kenany izy fa tia ny matory maraina mandritra ny adiny iray na mahery. Ah, mora ihany koa ny fanaovan'ny mpiasa an-trano niaraka taminy, naharitra 5 herinandro. Eo amin'ny sary mifatotra dia manodidina ny 4 volana izy. Mitovy amin'ny azy izy tamin'ny nahazoako azy tamin'ny 8 herinandro. Tsy lazaina intsony fa samy tia azy daholo. Manontany ahy foana ny olona hoe aiza no nahazoako azy ary raha manana bebe kokoa izy ireo. '
'Ity i Moeglee, Doxiepoo kelinay, 5 volana. Ny reniny dia Dachshund mini madinidinika ary ny dadany dia Poodle mahazatra madio. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Doxiepoo
Doxiepoo sary 1
Lisitry ny alika mifangaro Dachshund mifangaro
Lisitry ny alika mifangaro Poodle
italianina greyhound miniature pincher mix
shih tzu sy yorkie afangaro alika kely hamidy
alika lab hound mix mix dog
yorkie afangaro amin'ny pincher kely
mpanao ady totohondry alika kely volamena amidy
mifangaro min pin sy dachshund
sarin'ireo mpiandry ondry aostralianina kilalao